WINDOWS 7 ANAGHỊ AZA: ISI IHE NA NGWỌTA - WINDOWS - 2019
Na-akpata na ngwọta maka nsogbu nchịkọta na Windows 7
Otu n'ime nsogbu kasịnụ nke nwere ike ime na kọmpụta bụ nsogbu na mmalite ya. Ọ bụrụ na ọrịa malfunction pụtara na OS na-agba ọsọ, ndị ọrụ ogo ma ọ bụ ndị na-erughị ogo na-anwa idozi ya n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, mana ọ bụrụ na PC amaliteghị ma ọlị, ọtụtụ na-adaba na nzuzu na amaghị ihe ị ga-eme. N'ezie, nsogbu a anaghị adịkarị njọ dịka o nwere ike iyi ka ọ na-ele ya anya. Ka anyị chọpụta ihe mere Windows 7 anaghị amalite, na ụzọ ndị isi eji kpochapụ ha.
Ihe kpatara nsogbu na ngwọta
A na - ekewa nsogbu nke nsogbu na ịmepụta kọmputa ahụ gaa na nnukwu ìgwè abụọ: ngwaike na ngwanrọ. Nke mbu bu ihe jikota ya na odida nke ihe obula nke PC: diski diski, motherboard, power supply, RAM, etc. Ma nke a bụ nsogbu nke PC n'onwe ya, ọ bụghị nke sistemụ arụmọrụ, ya mere, anyị agaghị atụle ihe ndị a. Anyị nwere ike ikwu naanị na ọ bụrụ na ịnweghị nkà iji rụzie ọrụ ọkụ ọkụ, ọ bụrụ na ịchọta nsogbu ndị dị otú ahụ, ị ​​ga-akpọ nna ya ukwu, ma ọ bụ dochie ihe mebiri emebi ya na onye ọrụ ya.
Ihe ọzọ kpatara nsogbu a bụ obere voltage. Na nke a, enwere ike weghachite nkwalite ahụ nanị site n'ịzụta otu ike ọkpọsasị ike ma ọ bụ site na ijikọta na isi iyi nke ike ya na-agbaso ụkpụrụ.
Tụkwasị na nke a, nsogbu ahụ site n'iji os nwere ike ime mgbe nnukwu ájá na-abanye n'ime ikpe PC. Na nke a, naanị ịkwesịrị ịsachapụ kọmputa site n'ájá. Ọ kachasị mma iji tinye ahịhịa. Ọ bụrụ na ị na-eji nchacha ọkụ, gbanye ya site n'ịfụ, ọ bụghị ịfụ, dịka ọ nwere ike ịmị akụkụ.
Ọzọkwa, nsogbu na ịgbanwu nwere ike ime ma ọ bụrụ na akpa ngwaọrụ nke OS na-ebugharị bụ CD-drive ma ọ bụ USB edepụtara na BIOS, ma n'otu oge ahụ enwere diski na ụgbọala ma ọ bụ eriri USB flash na PC. Kọmputa ahụ ga-agba mbọ ịkwalite ha, ma buru n'uche na enweghi usoro sistemụ na mgbasa ozi ndị a, ọ na-atụ anya na mgbalị niile ga-eduga na ọdịda. N'okwu a, tupu ịmalite, kwụpụ PC na draịvụ USB niile na CD / DVD, ma ọ bụ kọwaa diski ike nke kọmputa na BIOS dịka akpa ngwaọrụ ịkwalite.
Enwere ike ịnwe ma ọ bụ usoro dị iche iche na otu n'ime ngwaọrụ ejikọrọ na kọmputa. Na nke a, ị ghaghị ịkwụsị ngwaọrụ niile sitere na PC ma gbalịa ịmalite ya. Site na nbudata nke oma, nke a ga-egosi na nsogbu ahụ bụ kpọmkwem na ihe a na-egosi. Jikọọ ngwaọrụ ahụ na komputa ahụ ma gbanyegharịa mgbe ọ bụla njikọ. Ya mere, ọ bụrụ na nsogbu a laghachiri, ị ga-ama ihe kpatara ya. Ngwaọrụ a ga-ekpuchi ya tupu ịmalite kọmputa.
Isi ihe nke ọdịda ngwanrọ, bụ nke enweghị ike ịwụnye Windows, bụ ihe ndị a:
Os faịlụ mmebi;
Ejighị arụmọrụ na-ezighị ezi nke os osịkalị mgbe nkwalite;
Ịga n'ihu na mmemme mmegiderịta na ikike;
Na ụzọ iji dozie nsogbu ndị dị n'elu na mweghachi nke osalite os, anyị na-ekwu okwu n'isiokwu a.
Nzọụkwụ 1: Mee ka Nhazi Nhazi Ọcha Kasị Mma
Otu n'ime ụzọ kachasị mfe iji dozie nsogbu PC bu akpa bụ ime ka njikwa dị mma mara.
Dịka iwu, ma ọ bụrụ na kọmpụta kọmputa ma ọ bụ mwepụ mbụ ya adaba, oge ọzọ ọ gbanwere, windo maka ịhọrọ ụdị ụdị osụọrụ OS ga-emepe. Ọ bụrụ na windo a emegheghị, mgbe ahụ, e nwere ụzọ ịmanye ya. Iji mee nke a, mgbe ị nyesịrị BIOS, ozugbo ụda ụda ahụ dị, ịkwesiri ịpị otu igodo ma ọ bụ nchikota na keyboard. Otutu, igodo a F8. Ma na obere oge, enwere ike ịnwe nhọrọ ọzọ.
Mgbe ntinye nhọrọ ntinye imepe meghere, site na ịgagharị na ihe ederede site na iji "Up" ma "Ala" na keyboard (n'ụdị akụ na-egosi na ntụziaka kwesịrị ekwesị) họrọ nhọrọ "Nhazi nhazi ikpeazụ" ma pịa Tinye.
Ọ bụrụ na a dakwasị Windows a, ị nwere ike iche na nsogbu ahụ dị. Ọ bụrụ na download adaala, gaa na nhọrọ ndị a kọwara na isiokwu dị ugbu a.
Usoro 2: "Ọnọdụ Nchekwa"
A na-eme ihe ngwọta ọzọ maka nsogbu ahụ na mbido site n'ịkpọ na Windows na "Ọnọdụ Nchekwa".
Ọzọ, ozugbo na mmalite nke PC ahụ, ịkwesịrị iji windo ahụ rụọ ọrụ na nhọrọ nke ụdị nbudata, ọ bụrụ na ọ gbanyeghị onwe ya. Site na ịpị igodo "Up" ma "Ala" họrọ nhọrọ "Ọnọdụ Nchekwa".
Ọ bụrụ na kọmputa amalitela ugbu a, nke a bụrịrị ezigbo ihe ịrịba ama. Mgbe ahụ, ebe ọ na-echere ka Windows zuru ezu, ị malitegharịa PC na, ọ ga-abụ na oge ọzọ ọ ga-amalite nke ọma na ọnọdụ nkịtị. Ma ọbụlagodi na nke a anaghị eme, ihe ị gara "Ọnọdụ Nchekwa" - nke a bụ ezigbo ihe ịrịba ama. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ị gbalịa weghachite faịlụ usoro ma ọ bụ lelee kọmputa gị maka nje. N'ikpeazụ, ị nwere ike ịchekwa data dị mkpa na mgbasa ozi, ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe ha banyere iguzosi ike n'ezi ihe ha na PC nsogbu.
Ihe Ọmụmụ: Otu esi arụ ọrụ "Ọnọdụ Nchekwa" Windows 7
Usoro 3: "Iweghachite mmalite"
I nwekwara ike iwepụ nsogbu ahụ a kọwara na enyemaka nke usoro ngwaọrụ a na-akpọ - "Iweghachite mmalite". Ọ dị irè karịsịa ma ọ bụrụ na njedebe ndekọ.
Ọ bụrụ na mmalite mmalite nke kọmputa Windows adịghị buut, ọ ga-ekwe omume na mgbe ịghachitere PC ọzọ, ngwá ọrụ ahụ ga-emeghe "Iweghachite mmalite". Ọ bụrụ na nke a emeghị, ọ nwere ike ịrụ ọrụ site na ike. Mgbe ịmechara BIOS ma bido, pịa F8. Na windo na-egosi, họrọ ụdị igba egbe a, họrọ "Nchọpụta nsogbu Kọmputa".
Ọ bụrụ na ị nwere paswọọdụ edozi maka akaụntụ onye nchịkwa, ị ga-achọ itinye ya. Ọnọdụ nchịkwa usoro ga-emepe. Nke a bụ ụdị Os na-agbapụta. Họrọ "Iweghachite mmalite".
Mgbe nke a gasịrị, ngwá ọrụ ahụ ga-anwa ịmeghachite mwepụta ahụ, na-edozi njehie achọpụtara. N'oge usoro a, ọ ga-ekwe omume na igbe igbe ga-emeghe. Ịkwesiri ịgbaso ntụziaka dị na ha. Ọ bụrụ na usoro ịmegharịrị ịmepụta ahụ ga-aga nke ọma, mgbe ọ gachara, a ga-ebido Windows.
Usoro a dị mma n'ihi na ọ dị nnọọ mma na ọ dị mma maka ikpe ndị ahụ mgbe ị na-amaghị ihe kpatara nsogbu ahụ.
Usoro 4: Lelee iguzosi ike n'ezi ihe nke faịlụ faịlụ
Otu n'ime ihe ndị Windows na-apụghị ịmalite bụ imebi faịlụ faịlụ. Iji kpochapụ nsogbu a, ọ dị mkpa iji mepụta usoro nke nyocha kwesịrị ekwesị na mgbake.
A na-eme usoro a site na "Iwu Iwu". Ọ bụrụ na ị nwere ike ịkpụ Windows n'ime "Ọnọdụ Nchekwa", wee mepee onyinye ahụ akọwapụtara site na usoro usoro site na menu "Malite"site na ịpị aha ahụ "Mmemme niile"wee gaa na nchekwa "Ụdị".
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịmalite Windows ọ bụla, mezie window ahụ na nke a "Nchọpụta nsogbu Kọmputa". A kọwara usoro mmeghe na usoro gara aga. Ekem, site na ndepụta nke ngwaọrụ, họrọ "Iwu Iwu".
Ọbụna na window window nsogbu adịghị emeghe, ị nwere ike ịgbalị iji redio na-eji LiveCD / USB ma ọ bụ jiri os disk diski. Na ikpe ikpe "Iwu Iwu" nwere ike ịkpalite site na ịrụ ọrụ ngwaọrụ nsogbu ahụ, dịka na ọnọdụ dị mma. Ihe dị iche iche ga-abụ na ị buut na-eji diski.
Na oghere meghere "Iwu iwu" Tinye iwu na-esonụ:
Ọ bụrụ na ị megharia uru ahụ site na ebe mgbake, ma ọ bụghị "Ọnọdụ Nchekwa", mgbe ahụ, iwu ahụ kwesịrị ịdị ka nke a:
sfc / scannow / offbootdir = c: / offwindir = c: windo
Kama nke agwa "c" Ị ga-ede akwụkwọ ozi dị iche, ma ọ bụrụ na OS gị dị na ngalaba n'okpuru aha dị iche.
Mgbe o jiri ya mee ihe Tinye.
Ihe bara uru sfc ga-amalite, nke ga-elele Windows maka ọnụnọ faịlụ ndị mebiri emebi. Oganihu nke usoro a nwere ike nyocha site na interface. "Iwu iwu". Ọ bụrụ na ị chọpụta ihe ndị mebiri emebi, a ga-eme usoro nkwụghachi ahụ.
Ntugharị nke "akara iwu" na Windows 7
Inyocha faịlụ usoro maka iguzosi ike n'ezi ihe na Windows 7
Nzọụkwụ 5: Gbanyụọ diski maka njehie
Otu n'ime ihe mere na enweghị ike ịkpụ Windows nwere ike ịbụ mmebi anụ ahụ na diski ike ma ọ bụ njehie ezi uche na ya. Ọtụtụ mgbe a gosipụtara nke a n'eziokwu ahụ na akpụ ụkwụ OS anaghị amalite ma ọ bụ na-agwụ n'otu ebe ahụ, ọ gaghị eru ọgwụgwụ. Iji mata nsogbu ndị dị otú a ma gbalịa idozi ha, ịkwesịrị ịlele na chkdsk bara uru.
A na-arụ ọrụ nke chkdsk, dị ka ọrụ mbụ, na-eme site na itinye iwu ahụ n'ime "Iwu Iwu". Ị nwere ike ịkpọ ngwá ọrụ a n'otu ụzọ ahụ dịka a kọwara ya na usoro gara aga. Na interface ya, tinye iwu na-esonụ:
Ọzọ, pịa Tinye.
Ọ bụrụ na ịbanye "Ọnọdụ Nchekwa"ga-amalitegharịa PC ahụ. Nyocha a ga-eme na bọmbụ ọzọ na-akpaghị aka, mana maka nke a, ị ga-ebu ụzọ banye na windo ahụ "Iwu iwu" leta "Y" ma pịa Tinye.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ọnọdụ nkwụnye nsogbu, ngwa ọrụ chkdsk ga-elele diski ozugbo. Ọ bụrụ na achọtara ezi njehie, a ga-eme mgbalị iji kpochapụ ha. Ọ bụrụ na draịvụ ike ahụ nwere mmebi anụ ahụ, ị ​​kwesịrị ịkpọtụrụ onye nwe ma ọ bụ dochie ya.
Ihe omumu: Lelee diski maka njehie na Windows 7
Usoro 6: Iweghachi nhazi buut
Usoro ọzọ nke na-eweghachi nhazi buut mgbe ọ gaghị ekwe omume ịmalite Windows na-arụkwa site na itinye okwu iwu ahụ n'ime "Iwu Iwu"na-agba ọsọ na gburugburu usoro mgbake.
Mgbe arụ ọrụ "Iwu iwu" tinye okwu:
Mgbe pịa nke a Tinye.
Ọzọ, tinye okwu ndị a:
Mgbe ịmalitegharịrị PC ahụ, o yikarịrị ka ọ ga-enwe ike ịmalite n'ụdị njikwa.
Usoro 7: Nje Virus iwepụ
Nsogbu na ịmepụta usoro ihe a nwekwara ike ịkpata nje virus na kọmputa gị. N'ọnọdụ nke a kapịrị ọnụ ọ dị mkpa ịchọta ma hichapụ koodu ojiji. Enwere ike ime nke a site na iji nje pụrụ iche nje virus. Otu n'ime ihe ndị a kacha mara amara nke klas a bụ Dr.Web CureIt.
Ma ndị ọrụ nwere ike ịnwe ajụjụ kwesịrị ekwesị, otu esi eleba ma usoro ahụ adịghị amalite? Ọ bụrụ na ịnwere ike ịgbanwuo PC gị "Ọnọdụ Nchekwa", mgbe ahụ i nwere ike igosi nyocha site na ịme ụdị mkpọmnta ego a. Mana ọbụlagodi na nke a, anyị na-enye gị ndụmọdụ ka ị mee nlele site n'ịgba PC site na LiveCD / USB ma ọ bụ site na kọmputa ọzọ.
Mgbe uru na-achọpụta nje, gbaso ntuziaka ndị a ga-egosipụta na ya interface. Ma ọbụlagodi na iwepụ koodu ọjọọ, nsogbu nsogbu ahụ nwere ike ịnọgide. Nke a pụtara na usoro nje nwere ike mebie faịlụ faịlụ. Mgbe ahụ, ọ dị mkpa iji nyocha, kọwaa n'ụzọ zuru ezu mgbe ị na-atụle Usoro 4 ma mezue ncheghachi mgbe achọpụtara mmebi.
Ihe Ọmụmụ: Ịchọta kọmputa maka nje
Usoro 8: Kọwaa mmalite
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịba n'ime "Ọnọdụ Nchekwa", ma n'oge nsogbu ịkpụ akpụkpọ ụkwụ, ọ ga-abụ na ihe kpatara nsogbu ahụ bụ usoro mmemme nke dị na ikikere. N'okwu a, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iji kpochapụ ya kpamkpam.
Malite kọmputa gị na "Ọnọdụ Nchekwa". Kpọọ Nweta + R. Window meghere Gbaa ọsọ. Tinye ebe ahụ:
Na-etinyekwu n'ọrụ "OK".
A ngwaọrụ a na-akpọ "Nhazi usoro". Pịa taabụ "Mmalite".
Pịa bọtịnụ ahụ "Gbanyụọ niile".
A ga-ewepu akọrọ site na ndepụta niile. Ọzọ, pịa "Tinye " ma "OK".
Mgbe ahụ, windo ga-emeghe, ebe ị ga-eme ka ị malitegharịa kọmputa ahụ. Achọrọ ịpị Rụgharịa.
Ọ bụrụ na, mgbe ịmalitegharịrị, PC amalite dị ka ọ dị na mbụ, nke a pụtara na ihe kpatara ya bụ na ngwa ahụ na-arụrịta ụka na usoro ahụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwere ike ịghachite ihe omume kachasị mkpa maka ikike. Ọ bụrụ na ị gbakwunye ngwa ọzọ ga-akpata nsogbu na mwepụta ahụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-amarịrị onye ikpe ahụ. Na nke a, ị ghaghị ịjụ ịtinye ngwanrọ dị otú ahụ iji bufee ya.
Ihe Ọmụmụ: Gbanyụọ akwụkwọ ikike na Windows 7
Usoro 9: Weghachite System
Ọ bụrụ na otu n'ime ụzọ ndị a arụ ọrụ, ị nwere ike weghachite usoro. Ma isi ọnọdụ maka itinye usoro a bụ iji nweta ebe ebighebeghachi.
Ị nwere ike ịga na reanimation nke Windows, mgbe in "Ọnọdụ Nchekwa". Na mmemme usoro nke menu "Malite" chọrọ imeghe ndekọ "Ọrụ"nke n'aka ya na nchekwa "Ụdị". A ga-enwe mmewere "Nweghachi usoro". Ị dị mkpa ka ị pịa ya.
Ọ bụrụ na PC anaghị amalite ọbụna na "Ọnọdụ Nchekwa", mepee ihe nkesa boot bootot ma ọ bụ rụọ ọrụ ya na nkwụnye nrụnye. Na ebe nchekwa, họrọ ọnọdụ nke abụọ - "Nweghachi usoro".
Njikwa interface ahụ mepee, akpọ "Nweghachi usoro" na nchịkọta ihe gbasara ngwá ọrụ a. Pịa "Na-esote".
Na windo na-esote ị ga-ahọrọ otu isi ihe nke ga-eweghachite usoro ahụ. Anyị na-akwado ịhọrọ nke kachasị ọhụrụ site na ụbọchị okike. Iji mepee ohere nhọrọ, lelee igbe nlele ahụ. "Gosi ndị ọzọ ...". Ozugbo a choro nhọrọ a choro, pịa "Na-esote".
Mgbe ahụ, windo ga-emeghe ebe ịkwesịrị iji gosi nkwenye gị. Iji mee nke a, pịa "Emere".
Usoro nhazi usoro Windows amalite, na-eme ka kọmputa malitegharịa. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ kpatara naanị site na ngwanrọ, ọ bụghị site na ngwà ihe kpatara ya, mgbe ahụ, a ghaghị ịmepụta ahụ na ọnọdụ ngosi.
Dịka otu algorithm ahụ dị, a na-ewepu Windows site na kaadị nchekwa. Naanị maka nke a na ebe nchekwa ka achọrọ iji họrọ "Iweghachi ihe oyiyi usoro"ma na windo nke mepee emepee ọnọdụ nke kaadị nchekwa ahụ. Ma, ọzọ, a ga-eji usoro a mee ihe ma ọ bụrụ na i meela ihe oyiyi os.
Dịka ị pụrụ ịhụ, na Windows 7 enwere nhọrọ ole na ole iji weghachite mwepụta ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-ahụ nsogbu ahụ mụtara na mberede, mgbe ahụ, ị ​​gaghị atụ ụjọ ozugbo, mana jiri ndụmọdụ dị na isiokwu a. Mgbe ahụ, ọ bụrụ na ihe kpatara arụmọrụ ahụ abụghị ngwaike, mana ihe kpatara software, ọ ga-abụ na ọ ga-ekwe omume iweghachi ọrụ ya. Ma n'ihi na a pụrụ ịtụkwasị obi, anyị na-akwado ike iji mgbochi, ya bụ, echefukwala imepụta ihe mgbake ma ọ bụ ndebe Windows.
Kedu ka esi lelee kaadị vidiyo maka arụmọrụ?
Imepe faịlụ DOCX na Microsoft Word 2003
Esi nyefee ìgwè nke VKontakte
Dee ihe nhazi dị na Microsoft Excel
Ngwa maka agba ọsọ na gam akporo
Dia bụ usoro n'efu nke na-enye gị ohere ịmepụta eserese dị iche iche na streamload. N'ihi ike ya, a na-ewere ya na ọ bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na ya. Ọtụtụ ụlọ akwụkwọ na mahadum na-eji nchịkọta akụkọ a iji zụọ ụmụ akwụkwọ. Nnukwu nhọrọ nke ụdị Na mgbakwunye na njirimara ndị a na-eji n'ọtụtụ algorithmic flowcharts, usoro ihe a na-enye ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụdị ndị ọzọ maka ihe osise ndị dị n'ihu. GụKwuo
Olileanya maka November 2018: free egwuregwu maka PS Plus ndị debanyere aha
Ihe ngosi ngbanwe AV AV 9.5.21